Andron’ny Mozea :: Haroso ny lanonana fankalazana ho an’Antananarivo • AoRaha
Andron’ny Mozea Haroso ny lanonana fankalazana ho an’Antananarivo
Ny 18 mey no fanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Mozea. Naroso ny 17 mey izany ho an’Antananarivo. Tsy nitsahatra ny nampiaina an’io daty io ireo mpitantana tranom-bakoka sy mpikirakira izany teto amintsika hatramin’ izany, eny fa na dia somary mangingina hatrany aza ny fahatsiarovana ireo tranom-bakoka eto Madagasikara.
Hivondrona amin’ny fankalazana manetriketrika an’ireo mozea misy manerana ny Nosy ny hetsika amin’ity taona ity miaraka amin’ny fikambanana maneran-tany ho an’ny Mozea eto Madagasikara (ICOM-Madagascar). Hisy ny fampirantiana hatao ny 17 mey etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely. Mandritra an’io fotoana io no hamahavahana ny lohahevitry ny fankalazana: « Ny Mozea, sehatry ny kolontsaina antoky ny ho avin’ny nentim-paharazana ».
Naroso ny daty fankalazana ho an’Antananarivo noho ny fisian’ny « Asa Tagnamaro », araka ny fanazavan’i Bako Rasoarifetra, mpampianatra mpikaroka sady manam-pahaizana manokana momba ny mozea sy ny fitehirizana ny vakoka.
Ho an’ireo faritra rehetra kosa dia hisy ny varavarana misokatra ny 18 mey izay fototra amin’ny lohahevitra iraisana. Hisy ihany koa ny fanentanana isan-karazany manodidina ny mozea izay hoentina hisintonana ny rehetra hahafantatra ny lanjan’izany tranom-bakoka izany eo amin’ny kolontsaina sy eo amin’ ny maha izy ny firenena iray.
Fiarahana talenta maroloko :: Hizara ny voka-pikarohana ara-mozika nataony ny tarika Gasy 4